NKWUO ANYỊ NA ANYỊ NA-ECHICHE | FXCC
Ihe dị mkpa nke nyocha na Market Forex
Azụmahịa ahịa Forex na-abata n'ụdị dị iche iche abụọ; nyocha na isi nyocha. Mkparịta ụka na-ada mbà kemgbe ọmụmụ nke ịzụ ahịa banyere nyocha nke kachasị mma, ma ọ bụ na ndị ahịa kwesịrị iji nchikota nke ịdọ aka ná ntị, iji mee ka mkpebi ndị ọzọ mara mma. Ajuju nke uzo ndi oru uzo na uzo di iche iche bu kwa ihe ekwesiri ka ha kwue okwu dika "echiche nke efcient-market", nke n'ekwu na onu ahia n'enyegh ihe ajuju.
Ebe mkparịta ụka anọwo na-aga n'ihu ruo ọtụtụ iri afọ banyere ụdị nyocha nke kachasị mma, otu mbipụta niile ọkachamara n'ịzụ ahịa na ndị nyocha ga-ekwenye na ọ bụ ụdị abụọ ahụ nwere atụmatụ na uru ndị nwere ike inyere ndị ahịa aka. Ndị na-eme nnyocha ga-ekwetakwa na ọ pụrụ iji ndụ na ngwa ngwa mee ihe ọ bụla ma ọ bụ ma ọ bụ ụdị nyocha abụọ ahụ. Ihe ndi oru ahia na ndi ahia na 1700 bu nke XNUMX si na XNUMX, ebe ekwuputara na ihe banyere candlestick malitere na China na iri na iri na atolu, site n'ikike nke nwoke nke Homma Munehisa meputara, iji choputa onodu maka ihe ndi ozo dika osikapa.
Ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta bụ isi ga-agbagha nyocha nke ụzụ, na-atụ aro na ihe ka n'ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ ntanetị enweghị ike ịrụ ọrụ, n'ihi na ihe ngosi bụ "njedebe onwe onye na ịkọ ụda". Ha nwere ike inwe obi abụọ banyere arụmọrụ na uru nke njirimara ndị a na-ejikarị eme ihe dịka: MACD, RSI, stochastics, DMI, PSAR (nkwụsị na njedebe), Bollinger agha wdg. Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ndị ahịa na-eji nlezianya arụ ọrụ na atụmatụ azụmahịa ha , onye ga-ekwu n'ụzọ doro anya na iji akara, ịbanye ma wepụ ahịa ha, na-arụ ọrụ n'ezie. Ọ bụghị oge ọ bụla, ma n'ihe banyere ihe gbasara nke puru omume na arụmọrụ nke oke, nyocha ha na-arụ ọrụ nke ọma karịa oge iji hụ na ha azụlitela atụmatụ atụmatụ ahia na atụmatụ, "ọnụ" dịka ndị ahịa na-ezo aka na ya.
Otú ọ dị, ọ bụ ihe ijuanya na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile nyocha-ndị ahịa ka ga-eji ụdị nyocha nyocha, ọbụna na vanilla, ihe ngosi akara ngosi. Ha ga - ekpebi ma hà ga - ahọrọ ụdị ọnụahịa ha na - ahọrọ: candlestick, Heikin - Ashi, line, pin-bars, wdg. Ma ọ bụ na ha ga - eji ụzọ dị mkpa maka ịzụ ahia tinyere: elu elu, elu dị elu, ihe omuma, ihe mgbagwoju anya, isi ihe di iche iche, nchighari nke Fibonacci na ichota ihe ndi ozo di iche iche. Mgbe ufodu n'ime ihe ndi a ka edere na eserese, ihe odide a nwere ike ile anya dika oru nke nwere otutu ihe edere. Ọ bụghị nchịkọta maka ebe ị ga-akwụsị ma wepụ akwụkwọ iwu iwu na ụdị nyocha nke ụzụ?
Ya mere, ọbụna raara onwe ha nye ndị na-azụ ahịa ahịa ahịa ka na-eji nyocha nyocha, ha ga-ahọrọ karịa itinye uche na akụkọ, ihe omume na nnata data iji mee, ma ọ bụ iji kwenye mkpebi ha. Ha ga-anọkwa n'okpuru nkwenye niile, ma eleghị anya site na iji Twitter, ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ ego nke iji ihe a na-akpọ "squawk", iji gbanye ahịa na mkpebi ikpeahịa ha.
Otú ọ dị, ngalaba a nke saịtị anyị abụghị ebe a iji tụlee mkparịta ụka dị mkpa nke nyocha nke isi na nchịkwa, anyị na-etolite akwụkwọ FX nke anyị ga-eme nke ahụ n'ogologo, anyị na-aga ịkọwa mkpirikpi mkparịta ụka dị n'etiti akụkụ abụọ nke nyocha.
Kedu ihe bụ Forex Technical Analysis?
Nkà na ụzụ (nke a na-akpọkarị TA) bụ amụma nke mmegharị ego ọnụahịa n'ọdịnihu dabere na nyochaa mmegharị ego gara aga. Ngwá ọrụ nyocha nwere ike inyere ndị ahịa aka ịtụ anya ihe yiri ka ọ ga-eme ahịa n'ogologo oge. Nkà na ụzụ na-eji ihe dịgasị iche iche akara na eserese nke gosipụtara mmegharị ọnụahịa n'oge oge ahọpụtara. Site na nyocha nchịkọta nke anakọtara site na ọrụ ahia, dịka ijegharị ego na olu, ndị ahịa nwere olileanya na ha ga-eme mkpebi banyere ego ọnụahịa.
Ọtụtụ ndị ọkachamara na-ahụ maka nkà na ụzụ na-eleghara ozi ọma anya. Ha na-ele anya na n'ikpeazụ, nkọwa na ma eleghị anya ihe nkiri nke ntọhapụ akụkọ akụ na ụba, ga-emesị kpughere onwe ya na chaatị. N'ezie, ọnụahịa na eserese nwere ike ịmeghachi mgbe ndị ahịa hụdịla na a tọhapụrụ data, maọbụ nwee ohere ịgụ akụkọ ahụ wee mee mkpebi nke a. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi ndị algorithmic / ndị ahịa ahịa dị elu na-enwe ike n'ihu na-agba ọsọ akụkọ na ọsọ uhie n'ihu ọtụtụ ndị ahịa azụ mmadụ nwere ike imeghachi omume.
Kedu ihe bụ Forex Fundamental Analysis?
Ndị isi nyocha na-enyocha uru bara uru nke ego, na nke a, ọ ga-achọ nyochacha ọnọdụ ọnọdụ akụ na ụba na-emetụta ọnụahịa nke ego mba. E nwere ọtụtụ ihe dị mkpa dị mkpa na-ekere òkè na mmegharị ego, ọtụtụ n'ime ha dị n'ime ihe a na-akpọ "atụmatụ akụ na ụba".
Ihe ngosi akụ na ụba bụ akụkọ na nchịkọta data sitere n'aka gọọmenti mba, ma ọ bụ ihe nzuzo nke onwe ya dị ka Markit, nke ahụ kọwapụtara ihe mmeba ego nke mba. Akuko akụ na ụba bụ ụzọ e si eji ahụ ike akụ na ụba nke mba. Aghaghachiri na oge ndokwa ka data na-enye ahịa ihe ngosi nke ọnọdụ akụ na ụba mba; ọ ka mma ma ọ bụ jụrụ? Na ahia FX, ngbanwe ọ bụla site na etiti, data gara aga, ma ọ bụ site na ihe e buru n'amụma, nwere ike ịkpata nnukwu ụgwọ na oke olu.
Nke a bụ akụkọ isi anọ nwere ike (na ntọhapụ) na-emetụta ọnụahịa ego
GDP bu uzo kachasi anya nke aku na uba mba; ọnụ ahịa ahịa nile nke ngwaahịa na ọrụ nile e mepụtara na mba n'oge nsogbu. GDP na-adabere na ya, ya mere ndị ahịa na-elekwasị anya na akụkọ abụọ e nyere tupu gnal GDP fgures; akụkọ di elu na akuko mbu. Nyochaa n'etiti akụkọ ndị a nwere ike ime ka ụda olu dị ukwuu.
Ahịa mkpọsa 'na-atụle nkwụnye ego niile ụlọ ahịa na-ere ahịa n'otu mba. Akụkọ ahụ bụ ihe njirimara bara uru nke usoro ihe eji emefu ndị ahịa, gbanwee maka mgbanwe mgbanwe oge. Enwere ike iji ya na ịkọwa ihe ngosi nke ihe mgbagwoju anya dị mkpa ma chọpụta nhazi akụnụba ozugbo.
Mgbanwe na mmepụta nke: ụlọ ọrụ, ọrụ nchịkwa na ihe ndị dị mkpa n'ime akụ na ụba mba nwere ike igosi oke ike nke akụ na ụba. Ọ na-akọkwa ike ha; ogo nke ikike ọrụ ma ọ bụ ọrụ ọrụ ọ bụla na-eji. O doro anya na mba ga-enweta mmụba mmepụta, ebe ọ bụ na ọ dị nso na ike ya.
Ndị ahịa na-eji data a na-eleba anya na-emepụta ngwá ọrụ, nke nwere ike ịba ụba dị ka ọchịchọ maka ike, na-agbanwe site na mgbanwe ihu igwe. Achọpụtaghachi ihe dị ịrịba ama n'etiti akụkọ nwere ike ime site na mgbanwe ihu igwe, nke nwere ike ịkpata volatility na ego mba.
CPI na-agbanwe mgbanwe mgbanwe ahụ na ọnụahịa nke ngwongwo ndị na-azụ ahịa gafere ihe ruru. narị abụọ dị iche iche. Enwere ike iji akụkọ a hụ ma mba ọ na-eme ma ọ bụ na-efu ego na ngwaahịa na ọrụ ya. A pụkwara iji ya chọpụta ma ụlọ akụ ma ọ bụ gọọmentị etiti ga-ebuli ma ọ bụ belata ma ọ bụ belata ego ọmụrụ nwa, ma ọ bụ dị mma ma ọ bụ kpalie akụ na ụba.